Madaxweynaha Galmudug oo loogu baaqay soo dhameystirka doorashada Aqalka Sare | Allbalcad Online
Home WARARKA Madaxweynaha Galmudug oo loogu baaqay soo dhameystirka doorashada Aqalka Sare
Guddiga doorashooyinka heer Federaal ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor in uu soo dhameystiro labada xubnood ee ku dhiman doorashada Aqalka Sare ee degaanada Galmudug.
Qoraal soo saareen Guddiga doorashooyinka ayaa waxaa ay Maamulka Galmudug ugu baaqeen inuu soo dhameystiro doorashada laba kursi ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ee ku harsan Maamulkaas.
Galmudug ayaa ah maamulka kaliyah ee doorashada Aqalka Sare aan wali dhameystirin.
Xubnaha guddiga ayaa ugu baaqay sidoo kale in la ilaaliyo qoondada haweenka ee 30% ee golayaasha dowladda waxay si weyn ugu mahadceliyeen Madaxweynaha Jubbaland oo dhameystiray doorashada Aqalka Sare, islamarkaana hubiyay qoondada haweenka.
Ugu dambayn, Guddiyada doorashooyinka dalka ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar garoow xoogan ugu jiraan hirgelinta doorashooyinka Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka oo dhawaan la filayo inay bilaabato.
Previous articleAMISOM admits killing seven civilians in Somalia
Next articleMadaxweynaha Jubbaland oo ka dalbaday guddiga doorashooyinka bilaabida doorashada golaha Shacabka